भरतपुर अस्पतालमा अत्याधुनिक आईसीयू सेवा थप – Saurahaonline.com
भरतपुर अस्पतालमा अत्याधुनिक आईसीयू सेवा थप
चितवन, ३० भदौ । चितवनको भरतपुर अस्पतालमा बुधबारदेखि २८ बेड क्षमतामा रहने गरी अत्याधुनिक आइसियु सेवा सुरु हुने भएको छ । अस्पतालको ए ब्लक पुरा भएपछि अस्पतालको आइसियू क्षमता बिस्तार गरिएको हो ।
यसअघि ९ बेड क्षमताको मात्रै आइसियू सेवा अस्पतालले प्रदान गर्दै आएको थियो । १० बेडको अत्याधुनिक सुविधा सहितको आइसियू बुधबारबाट सुरु भएको अस्पतालका मेसु डाक्टर रुद्र प्रसाद मरासेनीले बताए । थप १० बेडको इन्टरमिडियट आइसियू तत्काल सञ्चालनमा ल्याइने समेत मरासिनीले जानकारी दिए । सुरुमा अहिले २० बेड सञ्चालनमा आएपनि केही समयमा नै पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउने अस्पतालले जनाएको छ ।
भरतपुर अस्पतालमा आइसियूको शैया संख्या कम हुदा बिरामीहरु अन्य निजी अस्पतालहरूमा महंगो शुल्क तिर्न बाध्य भएका थिए । सरकारी अस्पतालमा नै यतिको ठुलो संख्यामा आइसियू सेवा सञ्चालनमा आएपछि गरीव, विपन्न र असाहयहरूले त पक्कै पनि लाभ उठाउने अस्पताल बिकास समितिका अध्यक्ष बिजय सुवेदीले बताए । अन्य पैसा तिर्न सक्ने नागरिकहरूले पनि अस्पतालबाट अत्याधुनिक सेवा लिन सक्ने सुवेदीले बताए ।
अत्याधुनिक आइसियू सेवा आरम्भ भएर जनतालाई जीवन प्रतिको आशा अझै जगाएको अध्यक्ष सुवेदीको भनाई छ । २०६६ सालमा अस्पतालमा ७ बेडबाट आइसियू सेवा सुरु गर्ने चिकित्सक डा. बिजय पौडेलले नेपालका सरकारी अस्पतालहरू मध्ये भरतपुर अस्पतालमा आइसियू सेवा उत्कृष्ट भएको दावी गरे । आफ्नो पहलमा भरतपुर अस्पतालमा पहिलोपटक आइसियू सेवा शुरु भएको मेडिसिन विभागका प्रमुख समेत रहेका डा. पौडेलले बताए ।
आइसीयुमा बेड क्षमता वृद्धि गरेपछि सरकारी अस्पतालको सेवा प्रभावकारी बनाउन पुग्ने पौडेलको भनाइ छ । यसैबीच, अस्पतालको ए ब्लक भवनमा ६ स्थानबाट एकैपटक अप्रेशन सेवा गर्न सक्ने गरी क्षमता बिस्तार भएपछि भरतपुर अस्पतालले २० बेड क्षमताको पोष्ट अपेरटिभ वार्ड स्थापना गरेको छ । सवै सुविधाहरू उपलब्ध हुने गरी नयाँ सेटअप सहित सेवा आरम्भ गरीएको अस्पतालका मेसु डा. मरासिनीले जानकारी दिए । अस्पतालले मदन भण्डारी ट्रमा सेन्टर समेत स्थापना गरी सेवा दिन थालेको छ ।